Inona no atao hoe CRO? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» Cro
CRO no fanafohezana ny Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po.
Ity fanafohezana ity dia fanafohezana ny fijerena tanjona amin'ny paikady ara-barotra ao anatin'izany ny tranokala, pejy fipetrahana, media sosialy, ary CTA mba hanatsarana ny isan'ny ho avy izay niova ho mpanjifa.
CRO no fanafohezana ny Lehiben'ny mpandrindra vola.
Mpanatanteraka izay manara-maso matetika ny varotra sy ny varotra ao amin'ny orinasa iray.